အသက်အရွယ်အလိုက် ဘေဘီလေးတွေကို တိုက်သင့်တဲ့ နို့ပမာဏ - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေး အိပ်နေတာကိုတောင်ကြည့်ပြီး သနားတဲ့မေမေတို့ သိချင်နေမယ့် မေးခွန်းလေးတစ်ခုကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေဖြေပေးပါရစေ။ ဒါကတော့ ဘေဘီလေးကို နို့လုံလောက်အောင်တိုက်မိရဲ့လားဆိုတာပါ။ ဘေဘီလေးအနားမှာ တစ်ချိန်လုံး ရှိမနေနိုင်တဲ့မေမေတို့အတွက် ဒီအချက်က တော်တော်လေးအရေးကြီးတာပါ။ အလုပ်ဖိလုပ်ရင်း ဘေဘီလေးကိုလည်း လုံလောက်တဲ့နို့ပမာဏတိုက်မိပြီး အာဟာရပြည့်ဝနေစေဖို့အတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးထဲကနေအတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးပါနော်။
ဘေဘီလေးက အသက်အရွယ်အလိုက် အာဟာရလိုအပ်ချက်ကွာခြားကြပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အာဟာရလိုအပ်ချက်က မြင့်လာသလို သောက်သုံးရမယ့် နို့ပမာဏကလည်း ပိုများလာမှာပါ။ ဒီတော့ အသက်အရွယ်အလိုက် ဘေဘီလေးကို တိုက်သင့်တဲ့ နို့ပမာဏ ကွာခြားချက်တွေရှိလာပြီပေါ့။
အသက်အရွယ်အလိုက် ဘေဘီလေးရဲ့ အစာအိမ်ဖွံ့ဖြိုးလာမှု
မွေးကာစမှာ ဘေဘီလေးရဲ့ အစာအိမ်က ချယ်ရီသီးလောက်ပဲရှိပါတယ်။
၃ ရက်သားအရွယ်မှာ ဘေဘီလေးရဲ့ အစာအိမ်က သစ်ကြားသီးအရွယ်လောက်ရှိလာပါပြီ။
၇ ရက်သားအရွယ်မှာ ဘေဘီလေးရဲ့ အစာအိမ်က တရုတ်ဇီးသီးအရွယ်လောက်ရှိလာပါပြီ။
ရက် ၃၀ သား အရွယ်လောက်မှာတော့ ဘေဘီလေးရဲ့ အစာအိမ်က ကြက်ဥအရွယ်တော်တစ်လုံးစာလောက်ရှိလာပါပြီ။
အသက်အရွယ်ကိုလိုက်ပြီး ကွာခြားနိုင်တဲ့ နို့ပမာဏ
ဘေဘီလေးကမေမေ့ဝမ်းထဲကနေထွက်လာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာကတည်းက နို့စသောက်ကြပါတယ်။
မွေးကာစအရွယ်မှာ ဘေဘီလေးက ၂ နာရီ ဒါမှမဟုတ် ၃ နာရီခြားတစ်ခါ နို့သောက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုံးမှာ ၈ ကြိမ်ကနေ ၁၂ ကြိမ်အထိသောက်နိုင်ပါတယ်။ မွေးပြီး ပထမနေ့နဲ့ဒုတိယနေ့တွေမှာ နို့ကို အောင်စဝက်လောက်ပဲ သောက်နိုင်ဦးမှာပါ။
ဒီလိုကနေမှ ၃ ရက်လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင် ဘေဘီလေးက နို့ကို နည်းနည်းပိုသောက်လာနိုင်ပါပြီ။ အသက် ၃ ရက်ကနေ ၄ ပတ်လောက်အတွင်းမှာ ဘေဘီလေးက ၃ နာရီခြား တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် ၄ နာရီခြားတစ်ခါလောက် နို့သောက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့ကို နို့ ၈ ကြိမ်အထိသောက်နိုင်ပါတယ်။ နို့ပမာဏကတော့ ၂ အောင်စကနေ ၃ အောင်စလောက်အထိသောက်နိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးက ၄ ပတ် ကနေ ၁၂ ပတ်အတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်လေးက ပိုကြီးထွားလာပြီဖြစ်သလို အာဟာရလိုအပ်ချက်ကလည်း ပိုများလာပါပြီ။ နို့လိုအပ်ချက်ကလည်း ပိုများလာပါပြီ။ ဒီအရွယ်မှာ ဘေဘီလေးက ၄ နာရီခြား တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် ၅ နာရီခြားတစ်ခါ နို့သောက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တာလုံးမှာ နို့ကို ၆ ကြိမ်အထိသောက်နိုင်ပါတယ်။ နို့ပမာဏကတော့ ၄ အောင်စကနေ ၅ အောင်စလောက်အထိသောက်နိုင်လာပါပြီ။
ဘေဘီလေးက ၁၂ ပတ်က နေ ၂၄ ပတ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးက ၅ နာရီခြား ဒါမှမဟုတ် ၆ နာရီခြားတစ်ခါနဲ့ တစ်နေ့ကို နို့ကို ၅ ကြိမ်လောက်အထိသောက်နိုင်ပါတယ်။ နို့ပမာဏကတော့ ၆ အောင်စ ကနေ ၈ အောင်စလောက်အထိသောက်နိုင်ပါတယ်။
၆ လကျော်လာတဲ့အခါ ဘေဘီလေးက solid food (ဖြည့်စွက်စာ)ကို စစားပြီဖြစ်တာကြောင့် နို့ကို အရင်ကလောက် မသောက်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း နို့ကတော့ ဆက်သောက်နေဦးမှာဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၄ အောင်စလောက်တော့ သောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထက်လည်း ပိုသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့ မတူဘူးပေါ့။ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုများတဲ့ ဘေဘီလေးတွေက နို့ပိုသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးက အစားတွေ စစားနေပြီဆိုရင်တောင်မှ ခန္ဓာကိုယ်ရော ဉာဏ်ရည်ပါအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အသက် ၂ နှစ်ပြည့်တဲ့အထိ မိခင်နို့ကို ဆက်တိုက်ပေးပါ။
How Many Ounces ShouldaNewborn Eat? https://www.healthline.com/health/parenting/how-many-ounces-do-newborns-need-to-eat Accessed Date 30 October 2019
How Often and How Much Should Your Baby Eat? https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/How-Often-and-How-Much-Should-Your-Baby-Eat.aspx Accessed Date 30 October 2019
How Much Breastmilk DoesaNewborn Baby Need Per Day? https://betterdoctor.com/blog/how-much-breastmilk-newborn-baby-need/ Accessed Date 30 October 2019